ကျန်းမာရေး PLUS MAG - - Tele RELAY တစ်ခုသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှားကြောင်းအားလုံးအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ဤကိုးကွယ်ရာသံပုရာ2ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်မသောက်ရ
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ "သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှားကြောင်းအားလုံးအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ဤကိုးကွယ်ရာသံပုရာ2ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်သောက် - နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG
ဒီဆေးတစ်လက်သံပုရာ2အဆသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှားကြောင်းအားလုံးအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမယ့်နေ့ရက်ကိုမသောက်ရ - နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG
Tele RELAY တစ်ခု 18 မေလ 2019
ကြိုဆို / အာဟာရ & ချက်ပြုတ်နည်း / အစားအစာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ /
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှားကြောင်းအားလုံးအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ဤကိုးကွယ်ရာသံပုရာ2ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်မသောက်ရ
by: စာရာ S က
Published: မေလ 18 2019
နေ့စွဲနောက်ဆုံး updated: မေလ 17 2019 ပု
မကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့, အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိခြင်း, ဆင်းရဲသောအစားအသောက်များတွင်အဲဒီဒြပ်စင်အဝလွန်အဘို့ကိုသာစွန့်စားမှုအချက်များမဟုတ်ပေမယ့်လည်းနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမြှင့်တင်ရန်။ မြင့်မားပိုလျှံလက်စထရောနဲ့မကောင်းတဲ့အဆီနှင့်ဆက်စပ်သော, ထိုရွေးချယ်မှုကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်၎င်း၏ကျန်းမာရေး၏သုခချမ်းသာကိုထိခိုက်စေပါ။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်သင့်ရဲ့လက်စထရောကိုလျှော့ချသင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ရန်ကြွယ်ဝဖျော်ရည်အာဟာရပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသီလကိုဆက်ကပ်။
ကပ် အကြံပြုချက်များ အမျိုးသားအာဟာရကျန်းမာရေးအစီအစဉ် (PNNS) ကြှနျုပျတို့အများအပြားနေဆဲပိုပြီးကယ်လိုရီဟင်းလျာများဘို့မိမိတို့5အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်ရက်စွန့်လွှတ်သေးဒါကြောင့်ခက်ခဲများနှင့်မထင်ထားဘူး။ အမှန်မှာကကနျြးမာရေးဝန်ကြီးဌာနထိုကဲ့သို့သောအကြံဉာဏ်ကိုထုတ်ပေးပြီဘာမျှမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ အသီးအပွ နှင့်ဖိုင်ဘာကြွယ်ဝဟင်းသီးဟင်းရွက်အစာခြေဘို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသီလရှိသည်။ အဆိပ်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဂလူးကို့စနှင့်အလက်စထရောများအာရုံစူးစိုက်မှုလျှော့ချ, သူတို့ကကိုယ်အလေးချိန်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အရှင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချဖို့စီမံခန့်ခွဲ။
ကြောင်းအဆုံး, ဒီမှာသာသင့်ရဲ့အသီးအပွနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့ကိုနေ့စဉ်ခွဲတမ်းဖြည့်ပါဒါပေမယ့်လည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှများစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရောက်စေဖို့ကူညီမည်မဟုတ်ကြောင်းအာဟာရဖျော်ရည်ဖြစ်ကြသည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်, သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်:
· 1 ကျွဲကောသီး
·2ဆလရီ
အရွယ်အစား3စင်တီမီတာ·ဂျင်းအမြစ်
ဒီသောက်ပြင်ဆင်ထားရန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: ထို့နောက်အကြွင်းအကျန် filter တစ်ချောမွေ့အရောအနှောသည်အထိမွှေတစ်ဦး Blender အားလုံးကိုသင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများထားတော်မူ၏။ သင့်ရဲ့သောက်ကိုစားခံရဖို့အဆင်သင့်ပါ!
အမြင်တစ်အာဟာရအချက်အနေဖြင့်, ဆက်လက်ရီရွက် ထိုကဲ့သို့သောမဂ္ဂနီဆီယမ်, ပိုတက်စီယမ်, ဆယ်လီနီယမ်သို့မဟုတ်သံကဲ့သို့အာဟာရပြည့်နှင့်အတူထုပ်ပိုး။ ဒါဟာအစများအမျှင်ဓာတ်နှင့်ပဒေသာ, များစွာသောဗီတာမင် (K, C, B6 နှင့် E) ကိုပါရှိသည် NBP, စိတျအပိုငျး n-butylphthalide အဖြစ်လူသိများ။ အပြင်ကရန်အရေးကို, Diuretics ဆီးဂုဏ်သတ္တိများကိုကျေးဇူးတင်ကိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဆလရီ၏ stimulatory သက်ရောက်မှုများအတွက်အဓိကတာဝနျရှိပါလိမ့်မယ် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစာခြေကူညီခြင်းနှင့်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်တိုးတက်စေရန်။
ကယ်လိုရီအတွက်အလွန်နိမ့်, ဆလရီကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်အစားအစာများတွင်သဘာဝမဟာမိတ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်း, ဟင်းချို, ပြုတ်သို့မဟုတ်ပေါင်းပါကစားသုံးသူများနှစ်သက်ရာမှအဆီတစ်အောင်စဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟင်းလျာများ enriches ။ ထို့ပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ LDL လက်စထရောနှင့် triglyceride အဆင့်ဆင့်လျော့ကျစေပါတယ်။ antioxidant များနှင့်ဆန့်ကျင်ရောင်ရမ်း, ကအဆစ်, ဂေါက်သို့မဟုတ်အသည်းရောဂါကူးစက်အပါအဝင်အများအပြားဝေဒနာတွေသက်သာ။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံး catecholamines သိသိသာသာစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများလွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသော, မှေးကွိုအိပ်ပျော်ခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်။
ရေထက်ပိုမို¾၏ရေးစပ်, ကျွဲကောသီး အူလမ်းကြောင်းအကူးအပြောင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်အစာခြေဖြစ်စဉ်ကိုအားပေးအားမြှောက်ထားတဲ့ pectin, ပါဝင်သည်။ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝသောကြောင့်လူကြီး2/3က၎င်း၏အကြံပြုနေ့စဉ်စရိတ်အများစုကျေနပ်မှထက်ဝက်သာစားသုံးကြောင်းလုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လေ့လာ အတူဘာသာရပ်များအပေါ်hypercholesterolemia နှစ်ခုကျွဲကောသီးတစ်နေ့၏စားသုံးမှုခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်လက်စထရောနှင့် triglyceride လျှော့ချနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
တစ်စက္ကန့် လေ့လာ ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်အတူအဝလွန်ဘာသာရပ်များပါဝင်သောယင်းတွေ့ရှိချက်သည်းခံကြ၏။ ကျန်းမာသောအစားအစာနှင့်ပုံမှန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တစ်နေ့လျှင်အစားအစာများမတိုင်မီဝက်ကျွဲကောသီးကိုစားခြင်းပြီးနောက်လူနာဒုတိယအုပ်စုတစ်စုကိုပြု၏ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကိုယ်အလေးချိန် 1,6 ကီလိုခံစားခဲ့ကြရသည်မယ်လို့ ဒီအသုံးမပြု Citrus ။
တစျထောငျသီလ၏ရှေးအမွှေးအကြိုင်, အ ဂျင်း အစာခြေစနစ်အပေါ်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူစတင်တစ်ဦးကြောက်မက်ဖွယ်ဝေစုရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောချုပ်အဖြစ်မမှန်သက်သာရာကျန်းမာအူသစ်ပင်ပန်းမန်ထိန်းသိမ်းအတွက်ထိရောက်သောကြောင့်လည်း anti-inflammatory, ဓါတ်တိုးခြင်းနှင့် antibacterial အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အကြိုးခံစားခှငျ့၏ဤအကွာအဝေးနှင့်အတူ, ကပူးတွဲနာကျင်မှု, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်ပျို့ခြင်းနှင့်အန်အပါအဝင်အများအပြားဝေဒနာတွေ, တားဆီးခြင်းနှင့်သက်သာရာလိမ့်မယ်။ ထို့အပွငျကလည်းနှောင့်အယှက်ကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့အိပ်မပျော်သက်သာရာရန်အကြံပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အိပ်။ မိမိအသိပ္ပံနည်းကျဆိုးကျိုးများအများအပြားယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့်မျှဝေကုစားနှင့်အဖွားအကြံပေးချက်များများ၏အခြေအနေတွင်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုသရုပ်ပြသေးရှိသည်နှင့်တိုးမြှင့လူကြိုက်များအတော်ပင်ပေမယ့်။
ဓါတ်တိုးဗီတာမင် C ကြွယ်ဝ, သံပုရာအမျိုးမျိုးသောအာဟာရအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူတစ်ဦး Citrus အသီးဖြစ်ပါတယ်။ ဖျော်ရည်, ရာသီသို့မဟုတ်သံပုရာရေ, သည်အခွင့်အလမ်းမှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှကျန်းမာပေးပါသည်။ နှလုံးနဲ့အစာခြေဖို့အကျိုးရှိသောကြောင့်ခုနှစ်တွင်သရုပ်ပြခဲ့ကြလိမ့်မယ် လေ့လာ % နှလုံးရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏လျော့နည်းအန္တရာယ်ခဲ့ 8 14 နှစ်4တစ်ကာလအတွင်းစားသုံးတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏။
ဒီအသောက်အစာအိမ်, biliary သို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ, အစာအိမ်နှင့် Citrus အစာအိမ်နာမှမတည့်မှုအတွက်အကြံပြုသည်မဟုတ်။ သငျသညျ anticoagulant ကုထုံးအောက်မှာသို့မဟုတ်သင်3လအတွင်းသို့မဟုတ်နို့တိုက်အမြိုးသမီးမြားအပျေါမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမမှန်လျှင်မှန်လျှင်ဒါဟာအစ, တစ်ဦးခွဲစိတ်ကုသမှုမတိုင်မီရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ အထဲတွင်ကျွဲကောသီးသောကြောင့်, တကမူးယစ်ဆေးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောမည်သည့်အန္တရာယ်မှရှောင်ရှားရန်သင့်ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုရှာခြင်းငှါအလွန်အရေးကြီးသည်။
ဗေဒင်: ဤတွင်3ရယ်စရာအကောင်းဆုံးရာသီခွင်၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုများမှာ - ကျန်းမာရေး PLUS MAG